Yemagariro Media Agency Summit | Yemahara Online Musangano | Chikumi 23, 2021 | Martech Zone
Kusiyana netsika webinars, Sangano reMusangano iri kuzonzwa kunge zviitiko zve-mu-munhu zvatakatadza isu tese. Kubva pakukwanisa kutaura takatarisana chiso nechiso nevatauri mushure mekuratidzira kwavo, kusangana nekukurukura nevamwe varipo, pachave nemukana wakawanda nguva dzemashiripiti. Heano mamwe mashoma eenyaya dziri pane ajenda:
Maitiro Ekuvaka iyo Scalable Yekutengesa Sisitimu Yako Agency - Joinha Lee Goff sezvaanofukidza mbiru ina dzebudiriro uye inotyisa system yekutengesa. Sisitimu yake ichapeta hutungamiriri hwako, kuvimbisa kuti hakuna lead inombowira kuburikidza nekutsemuka, inopa yakadzama mapaipi manejimendi, KPI yakajeka mukuita uye nezvimwe zvakawanda… Tune sezvaanopinda mune zvakadzama pamusoro pembiru ina uye nemabatiro avanogona kushandura kutengesa kweako agency .
Maitiro Ekukwidziridza Yako Agency nekukurumidza - Jason Swenk ari kuzokuratidza maitiro ekuzviongorora wega kuti ndeipi nhanho mune yako agency, uye chaizvo zvaunofanira kuita muzvikamu zvazvino uye zvenguva yemberi kuyera yako agency nekukurumidza kuti ugone kusvika kumusangano.
Maitiro Ekumhanya & Kutarisira Matambudziko kune Vatengi - Kelly Noble Mirabella anotungamira chirongwa ichi chekuzorora kwaanokuratidza fomula yekumhanyisa matambudziko sepfupi semazuva mashoma kana sekureba semwedzi. zviri nyore kugadzira chinetso chinoshamisa icho chinobata vateveri vako uye nekuvachengeta vachidzoka kune zvimwe kana iwe uchiziva fomula. Zvakareruka zvakakwana kuti chero munhu mukambani yako azviite - kunyangwe kana usiri tech savvy! Uyezve, Kelly achagovana newe zvaunoda kuti uwane vatsigiri (kana uchivada), ronga zvemukati, uye zvese zvinhu zvauchazoda kuti ubudirire.
Maitiro Ekutungamira Graphics Kune Akawanda Vatengi - Isu tese tinoziva kuti inguvai inotora kugadzira mifananidzo yemhando imwechete. Asi ko zvakadii kana iwe uchinge uchitarisira akawanda mabrandi? Zvinogona kuve zvinonetsa kuchengetedza kusagadzikana kwechiratidzo uye kugara pamusoro pezvinodikanwa zvemifananidzo kune ese magariro, dijitari uye isipo zvinobuda. Muchikamu chino, Annette McDonald achapfuura nekufashukira kwemabasa iwe kwaunogona kumisikidza kuti yako agency kuti ibudirire, uye kuyera, nekupa simba timu-mukwikwidzi wega wega kutora masimba ekugadzira zvinokatyamadza zvemukati zvemumwe neumwe wevatengi vako zviri nyore !
Maitiro ekuvhura Isu Kukura Yako Agency - Ndezvipi zvinoitwa nevatambi vepamusoro-soro zvakasiyana kuti vakure masangano avo? Kwete chete izvo 'chii' asi ivo 'vanozviita' sei ivo vanozviita, gore-ne-gore, kota-ne-kota uye mwedzi-ne-mwedzi. Masisitimu nemaitiro anodikanwa anozoratidzwa naRobert Craven. Uye zvinoshamisa kuti izvi hazvisi zve rocket sainzi kana fancy yakangwara-inovhara dzidziso. Tichagovana maturusi anoshandiswa nezviuru zvevamiririri vepamusoro.
Maitiro Ekubata Vatengi Kondirakiti & Kodhi yeMutemo - Saiye muridzi wesangano, chinhu chekupedzisira chaungade kufunga nezvacho zvibvumirano kana kunetsekana zviri pamutemo, asi uchitora nguva kumberi kuti uve nechokwadi chekuti wakaronga zvibvumirano zviripo, uye zviri padanho nemitemo yazvino yekopiriti sezvazviri kune zvemagariro enhau, zvinogona kubatsira kukudzivirira kubva kuzvinhu zvingangoita zvinodhura mumugwagwa. Muchikamu chino chakazara-ruzivo, iwe unodzidza kubva kugweta rakatsvakwa zvakanyanya, mutauri uye munyori Mitch Jackson, wobva waenda nekunzwisisa kwakajeka kwenguva yekushandisa zvibvumirano mune rako agency basa, zvekusanganisira, uye maitiro ekufunga yemutemo wekopiki mukushambadzira kwedhijitari.
Maitiro Ekutarisira Facebook Ads yeVatengi - Izvo zvinopfuura hunhu chete. Dzivisa zviteyeso zvinogona kukonzeresa maakaundi ako evatengi kana yako account yeAgent kubviswa kubva kushambadza paFacebook. Dzidza maitiro ekumisikidza zvakanaka uye nekuwana ako mutengi Facebook maakaundi ekukudzivirira seSangano uye chengeta ako ese maakaundi mune kumira zvakanaka. Joinha Amanda Robinson - Iyo Dhijitari Gal uye dzidza maitiro ekuchengetedza manejimendi Bhizinesi Zvirongwa, Mapeji, Ad Maakaundi, Pixels, Catalogs uye zvimwe pachinzvimbo chemutengi.
MaAgency: Unogona Sei Kugadzira Iyo Inokunda, Dhata-Inotungamirwa Pitch? - Kubva pane shanduko munzira mabhureki anoita mashandiro ebhizinesi, kuenda kuchinongedzo mukutarisana nedhijitari kubatika, COVID-19 yakavhura mikova kumatambudziko ese nemikana yemasangano nevatengi. Zvino kupfuura nakare kose, vamiririri vari kuzvigadzirisazve pachavo kuti vazadzise kukura uye kugadzirisa zvinodiwa nevatengi vavo uye tarisiro. Kutsvaga mikana mitsva yebhizinesi, kubata nemakwikwi ari kukura, uye kusiyanisa vatengi vavo ndomamwe ematambudziko epamberi eindasitiri ari kusangana nawo. Saka kuti ukunde matambudziko aya uye ugare pamusoro pemutambo wako, zvakakosha kuti uzvishongedze nemidziyo chaiyo inotyairwa nedata! Muchikamu chino, Aurelien Blaha achakubatsira iwe kuona kuti Digimind Historical Search ingakubatsira sei kudzikisa zvakanyanya nguva yakashandiswa kugadzirira mamaki, kuve akakodzera uye kuvimba nechirevo chinotungamirwa nedata, uye kuunza nyowani yekurudziro yezvinhu kune yako inotevera mushandirapamwe .
Tarisa uone iyo ajenda yese nemakumi mazhinji ekuparadzanisa zvikamu uye hurukuro! Zvakare, kune network, zvigadzirwa zvematumba, uye kuratidzira kwechigadzirwa!
Bhalisa kune Agency Summit
kuburitsa: Douglas Karr mumiriri wevarongi vechiitiko, Agorapulse, uye tiri kushandisa maratidziro ekuteedzera mune ino ziviso yechiitiko.
Tags: bokamusangano wepamusoroagorapulseAnnette Mcdonalddigiminddigitaalinen galJasoni swenkkelly anokudzwa mirabellaLee goffmitch jacksononline conferenceRobert cravenpasocial media agencypasocial media agency summitpasocial media online musangano